Beesha caalamka oo loo qoray dacwad ka dhan ah Farmaajo, Rooble iyo Fahad | Warkii.com
Home warkii Beesha caalamka oo loo qoray dacwad ka dhan ah Farmaajo, Rooble iyo...
Beesha caalamka oo loo qoray dacwad ka dhan ah Farmaajo, Rooble iyo Fahad
Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi ayaa warqad u qoray beesha caalamka isagoo dowladda dhexe ku eedeynaya ineysan qaab sharci ah u marin magacaabista guddiyada doorashada.
Warqadaan waxay si toos ah ugu socotaa Qaramada Midoobe iyo Midowga Afrika, wuxuuna Cabdi Xaashi ku tilmaamay in madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ay hanaan sharciga baalmarsan u mareen magacaabista guddiyada aad looga walaacay.
Xubnaha mucaaradka ayaa aad uga walaacsan guddiyada ay dowladda dhexe magacowday ee doorashada, waxaana lagu eedeeyay iney ku jiraan xubno ka tirsan hay’adda Nabad-Sugidda, shaqaalaha madaxtooyada iyo sidoo kale taageerayaasha dowladda.
Arrintaasi waxay keentay shaki laga qabo haddii ay guddigaas qaban karaan doorasho loo wada siman yahay, waxaana jira walaac badan oo laga qabo in doorashada qabsoonto.
Cabdi Xaashi ku eedeeyay madaxweynaha Maxamed C/llaahi Farmaajo, Ra’iisal wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble iyo Agaasimaha NISA Fahad yaasiin Xaaji inay musuqmaasuqeen xubnaha doorashada ee kasoo jeeda Gobollada Waqooyi ee Somaliland.
Cabdi Xaashi wuxuu si adag u diidan yahay in madaxweynaha, taliyaha NISA iyo ra’iisul wasaarahaba ay faragaliyaan doorashooyinka Xildhibaannada labada aqal ee Baarlamaanka kasoo galaya Gobolada Waqooyi, wuxuuna sheegtay inuu yahay qofka ugu sarreeya ee ka socda isla markaana uu isaga xaq u leeyahay.
Previous articleArmenia oo 2,317 oo askari looga dilay dagaalka Azerbaijan
Next articleMadax goboleedyada iyo madaxweynayaal hore oo yeelanaya
Maxay ka wada hadleen Shariif iyo Cali Guudlaawe
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shalay laba jeer la kulmay Madaxweyne ku xigeenka HirShabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. Kulankaan oo ka...
Faah-faahin: Qarax caawa ka dhacay magaalada Muqdisho
Cali Cabdullaahi Cosoble: “Qalad ayey aheyd in anagoo ah qabiil yar...
Caqabadaha haysta labada guddi ee uu magacaabay Ra’iisul Wasaare ROOBLE